WARARKII UGU DAMBEEYAY EE CIYAARAHA QARANADA AFRICA IYO KULAMADII LA CAYAARAY
Loading...	Home Wararka WARARKII UGU DAMBEEYAY EE CIYAARAHA QARANADA AFRICA IYO KULAMADII LA CAYAARAY
WARARKII UGU DAMBEEYAY EE CIYAARAHA QARANADA AFRICA IYO KULAMADII LA CAYAARAY	Monday, 28 January 2013 04:21	Koobka qaramada Afrika ayaa Shalay si rasmi ah uga furmay dalka South Afrika, iyadoo kulankii ugu horeysay lagu furay xulka martigelinaya koobkaan ee South Afrika iyo xulka ugu yar xulalka ka qeybgalaya Cape Verde Islands.
Ciyaartii ugu horeysay ee kulankaan oo ay labada xul ka wada tirsan yihiin Group A ayaa waxa ay ku dhamaatay barbaro goolal la'aan ah iyadoo South Afrika oo ay caawinayeen taageerayaashoosa tirada badan ee garoonka Soccer City ay ku guuldareysatay inay shabaqa ka soo taabato xulka ay ugu horeyso inay koobkaan qaramada Afrika ka qeyb galaan.
Cape Verde ayaana waxaa soo martay labo fursadood oo fiican oo goolal ay ku dhalin kareen halka xulka South Afrika oo liidatay ay heshay hal fursad fiican dhamaadkii ciyaarta, waxaana ay ku bilowdeen si niyadjab ah iyagoo ka maqnaa labadii koob ee ugu danbeysay ee qaramada Afrika.
Soccer City oo lagu furay ciyaaraha qaramada Afrika ayaana turumbada garoonka waxa ay dhamaadkii ciyaarta isku badeshay in taageerayaasha ay ku ooriyaan xulka Bafana Bafana.
Shacabka reer South Afrika ayaa intooda badan u texgelinayay Cape Verde xulka ugu sahlan ee ay wajahayaan Group A, waana ay ku farxeen marka ay isku soo aadeen. Laakin Cape Verde waxa ay ku jirtaa qiimeynta adduunka 70 halka South Afrika ay ku jirto 85 taasoo ku tusineysa in natiijadii maanta aysan xaqiiqdii aheyn lama filaan.
Kulanka labaad ee Group A ayaa waxaa xilli dhow wada ciyaari doona xulalka Angola iyo Morroco, iyadoo haatan Cape Verde oo si lama filaan ah dhibic uga heshay South Afrika ay wada leeyihiin min hal dhibic.
Dhanka kale Xulalka Angola iyo Morocco ayaa ka faa'ideysan waayay barbarihii ay ku kala baxeen Koofur Afrika iyo Cape Verde kadib markii ay iyagana aysan wax goolal ah iska dhalin kulan ka tirsan koobka qaramada Afrika guruubkiisa A.
Ciyaartan oo ka dhacday Johannesburg ayaa waxaa ay labada koox runtii ay sameeyeen fursado ay goolal ku dhalin kareen hase ahaatee barbarahan ayaa ka dhigaya in guud ahaan afarta xul ee ku jira guruubka A ay min hal dhibic haystaan.
Weeraryahanka Angola ee u ciyaara Manchester United Manucho ayaa la filayay inuu saameyn ku yeelan doono kulankan hase ahaatee weeraryahankan ayaan waxba ka samayn waayay garoonka iyadoo xulka Morocco uu ahaa mid ciyaar wanaagsan soo bandhigay.
Guruubka A ayaa kooxuhu yihiin weli mid aan kala cadeyn oo aan la saadaalin karin xulalka ka soo bixi doona. Iyadoo xulka koofur Afrika la rajaynayay in ay guul weyn ka gaarto kulankii ugu horeeyay ayaa weli tartan koobka qaramada Afrika aan wax gool ah ka dhalan labadii kulan ee ugu horeeyay ee la ciyaaray
Kulamada kale ee lagu wado in Maanta ay dhacaan ayaa waxaa isaga horiman doona guruubka B iyadoo ay wada ciyaari doonaan xulalka Ghana iyo Congo
Wixii ka soo kordha kala soco Wararkeena Geesguud News Muuse Osman Wararka Ciyaaraha London